::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather अनुभूति : बरदुबई पार्कमा नेपाली जोडीका पीडा - युवराज नयाँघरे:: Rojgar Manch ::
शनिवार, २०७४ असार ०३ गते २३:२२
‘म त हेरेरै अगाउँदिनँ !’ गोविन्दबहादुर कार्कीले छेवैमा झुप्पीलाई गहिरेर हेर्दै भन्यो । वरिपरि अरू पनि कार्कीकै जस्ता जोडीहरू गुनगुन गरिरहेकै छन् । झुप्पीलाई उसले चारवर्ष अघि बिहे गरेथ्यो । पहिलो बच्चा गर्भमा अडिन सकेन । मोरङको दुर्गम गाउँबाट दुईवर्ष अघि यिनीहरू एउटै कम्पनीमा काम गर्न दुबई आएका हुन् ।
हप्ताको एक दिन शुक्रबार मात्र यिनको भेटघाट हुन्छ । शुक्रबार कहिले होलाजस्तो हुन्छ । आज भेट्न नपाई गोविन्दले झुप्पीलाई आफ्नो छेउमा राखिहाल्यो । ‘तिमी अलिक दुब्लाएजस्ती छ्यौ नि !’ उसले झुप्पीको नारी छाम्यो । आँखी भौं पनि कान्छी औंलाले उसले मिलाइदियो । अनि कानैमा ओठ जोतेर भन्यो– ‘अचेल यसरी परपर कहिलेसम्म हुनेभन्ने लागिरहन्छ !’ झुप्पीले देब्रे कुना ओठ टोकी ।
दुबईको यो बरदुबई पार्क हो । सबै नेपाली कामदार भेला हुने ठाउँ यही हो । यहीँ आएर सबैले भेट्ने ठाउँ । गोविन्दले झुप्पीलाई फेरि हे¥यो । उसले झुप्पीका गोडा थिच्यो । अनि सोध्यो– ‘बेलुका नुनपानीले यसो गोडा सेक्नु है ।’ उसले टाउको मात्र हल्लाई । झुप्पीले ओठ एक पटक भित्र हुली र बोली– ‘शुक्रबार यसरी भेटेर गएपछि निन्दै्र लाग्दैन ।’ गोविन्दले खुट्टाको गोलीगाँठोमा छाम्यो । झुप्पीले आँखा चिम्म गरी । दुवै एकछिन मौन भए ।
कामको खोजीमा दुबई आएमा झुप्पी र गोविन्दलार्य कम्पनीले अलग–अलग ठाउँमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिएको छ । उनीहरू साताको एक दिन भेट्न पाउँछन् । पाखुरा समातीरहेकी झुप्पीले गोविन्दको कुइनोेटोलाई अघिदेखि मुसारी रहेकी छ । ‘अचेल त भोक पनि लाग्दैन ।’ झुप्पीले दिक्क मानेर भनी । ‘मलाई पनि बिहीबारको रातीमात्र भोक लाग्छ । किनभने भोलिपल्ट तिमिलाई भेटिने हुनाले ।’ गोविन्दले झुप्पीको कानको मुन्द्रा मिलाउँदै भन्यो । औंला चलिरहून् जस्तो सन्चो मानी झुप्पीले । गोविन्दले पनि हात हटाएर उसका कानका लोतीबाट । यता उता यता उता चलाइरह्यो ।
खुट्टा पसारेर बसेकी थिई झुप्पी । उसका गोडादेखि घुँडासम्म बेला बेलामा थिचिरहेको हुन्थ्यो गोविन्द । उसका हत्केला एकछिन पनि शान्त देखिँदैन थिए । ‘हामी ठीक दुई वर्ष भो सँगै नबसेको ।’ झुप्पीले भनी । टाउको मात्र हल्लायो गोविन्दले । अनि कम्मरमा अँगालेर बेरबार पा¥यो । झुप्पीले आँखा चिम्लेर टाउको ढल्काई गोविन्दको कुमतिर । दुवै छिनमा हराए । दुवैको मुटुमात्र चलेको सुनियो । अरू चालचुल केही छैन ।
गोविन्दले कम्मरबाट हात हटाएन । झुप्पी पनि आनन्दित भइरही । ‘अचेल बेलुका खाना पकाउने पालो कस–कसको पर्छ ? तिमी अबेर आउँछ्यौ होला ?’ गोविन्दले आवाको झोँकामा आएको कपाललाई मूठो पार्न कम्परबा झुप्पीका निधारतिर हात लग्यो । एकछिन कपाल गुजुल्टो पा¥यो । उसले विस्तारै सम्याएर कपाल कानतिर सिउरिदियो । ‘बेलुका भ्याउँदिन । बिहानको जिम्मा मेरो । नक्कली र म आलोपालो गर्छौं । अरूले पकाएको मलाई मन पर्दैन । मीठो पनि हुँदैन । मेरो र नक्कलीको स्वाद केही मिल्छ ।’ झुप्पीले यत्ति भन्नपनि निकै समय लगाई ।
गोविन्दले एकपटक कपालको मुठो नाकसम्म ल्यायो । अनि फेरि सोध्यो झुप्पीलाई– ‘कहिले नुहाएकी ?’ ‘आज आउनलाई समय बचाएर हिजै राती नुहाएँ मैले । राती यस्तै १२ बजेथ्यो नुहाउँदाखेरि ।’ उसले थामिई–थामिई यति कुरा भनी । अनि पाछाडिको आफ्नो कपालको मुठा अगाडि ल्याएर मुठीमा बाँधेर ‘स्याम्फुको बास्ना गनाएछ’ उनले भनी । रातभरि कपालभित्रै खाँदिएर बसेछ ।’ झुप्पीले यत्ति भनी सुस्तरी ।
गोविन्दले निलुँलाजस्तो गरी हे¥यो झुप्पीलाई । अनि कानैमा मुख जोतेर भन्यो– ‘तिमीले स्याम्फु नलाउँदा तिम्रो कपालको गन्ध मलाई थाहाभइहाल्छ ।’ ‘अब आउँदा सादा पानीमा कपाल धोएर आउनु है । तिम्रो मीठो गन्ध सुँघ्न मन छ मलाई ।’ कलिलो आवाज बनाएर बोल्यो गोविन्द । झुप्पीले आँखा लट्ठ पारी । ऊ भित्रैदेखि पग्लिरहेकी थिई ।
उनीहरू यहाँ बसेको तीन घण्टाभन्दा बढी भइकेको थियो ।समय नगए हुन्थ्यो । तर रोक्ने पो कसले ? घडी चाँडो घुमेजस्तो लागिरहन्छ । ‘कत्तिचाँडो काँटा घुमेके ?’ गोविन्दको औंला पड्काउँदै झुप्पी बोली । ऊ साँझ पर्न दुई तीन घण्टा मात्र बचेको देखेर भित्रैदेखि पाक्किर्छ ।
‘तिमीले त्यो खिरिलो सिक्री किन फुकालेकी ?’ सिक्री अडिने घाँडी छामिरह्यो गोन्दिले । झुप्पीले निकै सन्चो मानी । उसले सुमसुमयाउँदै फेरि भन्यो– ‘त्यो निकै सुन महँगिएको बेलामा मैले तिमीलाई सिक्री बनाउको थिएँ । लगाऊ है । अर्को पटक आउँदा म हेर्न चाहन्छु ।’
उसका हात घाँटी भएर काँधमा गएर बसे । गोविन्दले काँधमा राखेको हातले विस्तारै थिच्यो । अनि विस्तारै बोल्यो– ‘कहिलेसँगै बस्ने ! कहिले बच्चा पाउने । कहिले आमा बाबु बन्ने ।’ झुप्पीले टाउको झुकाएर गोविन्दतिर शरीर छोडुँला जस्तो गरी । गोविन्दले काँधमा सुमसुम्याउन छोडेन । ‘कहिले–कहिले ?’ आँखा चिम्लिएरै बोली झुप्पी । ऊ भित्रभित्रै पुरै पग्लिसकेकी थिई । ऊ यत्ति बोल्दासम्म पुरै लल्याकलुलुक भइसकेकी थिई ।
झुप्पी मुन्टो उठाएर कोल्टिएर बसी । गोविन्दले देब्रोतिरको चिउँडो निहालेर हेर्दै भन्यो– ‘अस्तिभन्दा यो पालि आउँदा तिम्रो कोठी अलिक बढेछ ।’ ‘किन यसरी बढेको होला ?’ गोविन्दले सुस्तरीसँग सोध्यो । फिस्स हाँसेर झुप्पी बोली– ‘धेरै माया पाउन नपाएर हो कि ?’
गोविन्द झस्कियो । ‘नबढ्ने बढ्छन्, बढ्नु पर्ने बढ्दैनन् ।’ नाइटोमाथि औंला चलाइरहेको गोविन्दले झुप्पीको बोली सुन्यो । गोविन्दको औंला टोकिदिई झुप्पीले ।
घाम डुब्न लाग्दा पार्कबाट मान्छेहरू पातलिएका थिए । बिछोडिनुपर्ने पीडाले हात समातेर बस्नेहरू घडी हेर्दै हत्तारिरहेका थिए । ‘लोग्ने स्वास्नी भनेर के गर्नु ? एकरात एउटै ओछ्यानमा सुत्न पा हैन ।’ झुप्पीले आँखा तरी । भूइँतिर आँखा घोप्ट्याएर गोविन्द बोल्यो– ‘के गर्नु यो कम्पनीले एकै ठाउँमा राखेन । होटेल जाउँ, खर्चले धान्दैन ।’ झुप्पीका ढाड सुमसुम्याइरहेका गोविन्दका आंैला हतारिएर दगुरिरहेका छन् । गोविन्द भन्दा बढ्ता भोकाई झुप्पी ।
छेउमै डुंगा ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । झुप्पीले ती डुंगा हेरिरही । हरेक ढुंगामा कसैले चिनेका साथीका जोडी थिए । रमा–रामा, ज्ञानबहादुर, हरि–मानकुमारी र गरुडनाथ–गीताकुमारी थिए जोडीहरू । झुप्पीले ती जोडी गएको हेरिरही । उसका छेवैबाट गएका ती जोडीले उसलाई जिस्काए जस्तो लाग्यो । ऊ झन् छट्पटिई । एकदमै आकुलव्याकुल भई ।
अनि भनि– ‘जे सुकै होस् हामी पनि जाम ढुंगा तरेर । एक रात देरामा बसौं ।’ गोविन्दले खल्तीको दिराम कति होला भनी मनमने अनुमान ग¥यो । पुग्ला कि नपुग्ला उसले हिसाब गर्न औंला नै भाँच्यो । अरू धेरे छन् बरदुबई पार्कमन– दिरामले हराएर बाँचेका मनहरू ।